Indlu yeendwendwe kwinqaba ehlangeneyo kwi-Uckermark - I-Airbnb
Indlu yeendwendwe kwinqaba ehlangeneyo kwi-Uckermark
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguCharles
Intle indlu kwaye ime yodwa. Ingasetyenziselwa njengendawo yokusebenza. Imalunga neemitha ezingama-200 ukusuka kwinqaba yaseWartin, ehlala ibizwa ngokuba yeyona nqaba yothando kwi-Uckermark. I-Wartin Castle Ensemble iphuhliswe njengendawo yesayensi, inkcubeko kunye nokunyamezela ukususela ekuweni koDonga kwaye sinethemba lokuba uya kuyithanda njengoko sisenza.
IHaus Bohlmann sisakhiwo sezitena kunye nesiqingatha semithi. Yalungiswa ngononophelo malunga neminyaka eyi-10 eyadlulayo.
Le ndlu inamagumbi okulala ayi-5, ikhitshi kunye negumbi lokuhlala elinomabonakude wocingo olungenazingcingo. Kumgangatho ophantsi kukho igumbi lokulala eliphindwe kabini kunye negumbi elinebhedi ephindwe kabini kunye nebhedi enye, zombini inamagumbi okuhlambela e-en-suite. Phezulu kukho igumbi lokulala eliphindwe kabini elinegumbi lokuhlambela le-en-suite. Izindlu zangasese ezimbini kunye negumbi lokuhlambela elineshawa kunye nebhafu ziyafikeleleka ngepaseji kumgangatho wokuqala. Ezi kwabelwana ngegumbi elinebhedi ephindwe kabini kunye negumbi elinye kunye negumbi elikhulu elineebhedi ezimbini kunye neebhedi ezintlanu ezingatshatanga.
Ekubeni inkqubo ye-Airbnb isebenza kuphela ngenani leendwendwe kungekhona inani lamagumbi, silungiselele amaxabiso ethu ngokwale nkqubo ilandelayo:
Ngexabiso elisisiseko le-160.00 € ungasebenzisa amagumbi amabini amabini (abantu abayi-6).
Kumagumbi ongezelelweyo, i-50.00 € eyongezelelweyo iya kuhlawuliswa, kungakhathaliseki ukuba isetyenziswe ngabanye okanye kabini. Ukuba ufuna ukuba negumbi elinye, kufuneka ubhukishe elinye igumbi kwa-Airbnb elinabantu aba-2.
Xa usebenzisa igumbi elinye, inani elipheleleyo leendwendwe ezinokubakho liyancitshiswa ngokufanelekileyo.
Inkqubo ye-Airbnb ineemeko zokurhoxisa kwangaphambili ezimiselwe kwangaphambili, ezisebenza ngamaxesha obhubhane. Siziqhelanisa neetemplates kunye nesakhelo esitshintsha rhoqo kwaye sihlala sizama ukufumana isisombululo. Ukuba akukho sisombululo, imiqathango yangoku yokurhoxisa echaziweyo nekhethwe ngu-Airbnb iyasebenza.
Indibano yenqaba ibekwe kwilali yaseWartin kumasipala waseCasekow. Kukho amachibi amaninzi okuhlamba kwindawo ekufutshane, ekufutshane yi-2 km kude. Ecaleni kwegadi yenqaba kukho icawa yenkulungwane ye-13. Kukho ibala elitsha lokudlala labantwana kwiziko lelali ngqo ngaphesheya kwenqaba. Kwakhona sinomgcini weenyosi kwisiza, apho unokuthenga ubusi obutsha kwaye abamelwane bathengise amaqanda. ECasekow kukho imakethi encinci kunye nebhula encinci / indawo yokubhaka enemenyu yesidlo sasemini. Ivenkile enkulu ekufutshane isePenkun (Penny). Kukho ezinye izinto ezinokuthengiseka eStettin, ePrenzlau naseSchwedt (zonke ezimalunga ne-25 km).
Usapho lwethu oluncinci luhlala kwi-ensemble yenqaba kwaye siyavuya ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuthi unayo. Mna, Charles, ndingowaseNew Zealand kwaye ubukhulu becala ndisebenza eWartini. Umfazi wam uNui uvela eBangkok kwaye uyikhathalela ngothando yonke ipaki kunye negadi ejikeleze inqaba. Intombi yethu eneminyaka esixhenxe ubudala uBini yazalelwa eNgilani yaye isendleleni eya esikolweni ingaphaya komda isiya ePasewalk (eMecklenburg-Western Pomerania). Iqela lethu ligqitywa ngamalungu eqela aququzelela indawo yokuhlala kunye nam kwaye ajonge iindwendwe zethu.
Usapho lwethu oluncinci luhlala kwi-ensemble yenqaba kwaye siyavuya ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuthi unayo. Mna, Charles, ndingowaseNew Zealand kwaye ubukhulu becala ndisebe…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Casekow